သက်ဝေ: ကြိုးစားပမ်းစားရေးတဲ့စာ (သို့) ပေါင်ချိန်စက်
Posted by သက်ဝေ at 11:10 AM
Mon Petit Avatar August 9, 2011 at 11:25 AM
It seems like our scale at home, showing weight, BMI, visceral fat, body age, etc. I hate that too Ma Ma Thet Wai!
Hmoo August 9, 2011 at 11:31 AM
ညိမ်းနိုင် August 9, 2011 at 11:51 AM
တင်မက ဟိုရွေ့ဒီရွေ့လုပ်သလိုလိုနဲ့ ဆောင့်သာချပစ်ဗျာ..
Kay August 9, 2011 at 11:53 AM
နည်းပေးမယ်.. နာရီ တွေ လိုပဲ..သူ့လက်တံ လေးကို.. ဇီးရိုးကနေ နည်းနည်း ရွှေ့ထား..
ကိုယ့်ကို ကိယ် စိတ်ဓါတ်ကျအောင် မလုပ်ရဘူးလေ..း)
ဒါနဲ့..မသက်ဝေ တခါ ရေးဖူး တဲ့..မလေး တောင်ပေါ် မြို့လေးမှာ ပျောက်သွားတဲ့.. ပိုးထည် ပညာရှင် ကြီး အကြောင်း .. တလောက မှ..စာအုပ် တအုပ် မှာ အဲလူကြီး အကြောင်း တခန်း ရေးထားတာတွေ့ တော့..သတိရ လို့ .. စကန် ဆွဲ ပြီး ပို့ပေးမယ်..
"အိမ်ထောင်ရှင် ယောင်္ကျားတွေအတွက် လက်စွဲတော်ပို့စ်"ဆိုရင်
ပို့စ်နာမည်လေးက ပိုလှသွားလေမလား??? :P
ဒီပို့စ်လေးအတွက် အစ်မသက်ဝေကိုကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးး))
T T Sweet August 9, 2011 at 12:05 PM
၅ကီလိုဆိုတော့ လွန်တာပေါ့ သူငယ်ချင်း။ နှုတ်သာနှုတ်။ အားပေးတယ်။ စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရော ...း))
ချစ်ကြည်အေး August 9, 2011 at 12:54 PM
စိတ်ချမ်းသာအောင် နေစမ်းဘာာာ၊ ပေါင်ချိန်မနေပါဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်လုံးကို အိမ်ကလူချီနိူင်သေးသ၍ အိုကေနေတာပဲ ဟိ :))
မောင်မျိုး August 9, 2011 at 12:54 PM
ချိန်ပြီးတိုင်း ၅ ကီလိုတိတိ နှုတ်ယူပြီးမှ အတည်ဖြစ်သည်။
ွှအဲ့တာဆို ပေါင်ချိန်စက်မှာ စာလေးကပ်ထားပေါ့ အစ်မရ ဟဟားးး)
စုချစ် August 9, 2011 at 2:18 PM
အစ်မသက်ဝေရေ... ဖတ်ကောင်းသတော့... စိတ်တိုနေပုံလေးမြင်ယောင်လာတယ်...
မအိမ်သူ August 9, 2011 at 2:52 PM
အင်း.. အဲဒီပေါင်ချိန်စက်ပေါ်တက်တိုင်း မရဲတရဲ ရွံ့ တွံ့တွံ့နဲ့ တက်ရမယ့်ပုံ.. နောက်ဆို မွေးသက္ကရာဇ်မေးရင် သက္ကရာဇ်တွေ တိုးပစ်လိုက် အသက်ကိုပိုထည့် အရပ်ကောမမေးဘူးလား အရပ်ပါထည့်ရတဲ့ ပေါင်ချိန်စက်မျိုးတွေ့ဖူးလို့.. ပေါင်ချိန်ကာနီးရင် လက်က လေးလေးလံလံ အထုပ်တစ်ခုပါကိုင်ပြီးချိန် အလေးချိန်တိုးရင် အထုပ်ပေါ်ချလို့ရတယ်။ အဟီး နည်းကောင်းတွေပေးနေတာ...းD
Iora August 9, 2011 at 2:53 PM
ဒင်းတော့နေနှင့်အုန်း။ ၀ိတ်ကျသွားမှ စိတ်တုိုင်းကျ တက်ချိန်ပစ်မယ်လို့ ကျိန်းပစ်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ကသာရှိတာ မကျိန်းနုိုင်လို့ ခက်နေတယ် မသက်ဝေရေ။ ကုိုယ့်မှာတော့ မသက်ဝေ လိုဟုိုယိမ်းဒီယိမ်းနည်းနဲ့ ချိန်တဲ့အဟောင်းလေးဘဲရှိတာပါ။အဲဒါလည်း သူဝယ်လာတာဘဲ။ ဘာကြောင့်သူတို့ ကပိန်ပြီး ကုိုယ်တုို့ ကမပိန်ရတာလည်း။ မကျေနပ်ဘူး။း)
sonata-cantata August 9, 2011 at 3:13 PM
စတိုခန်းထဲ ထိုးထည့်ထားလိုက်တာ ကြာပေါ့း)
Nyi Linn Thit August 9, 2011 at 3:27 PM
ပေါင်ချိန်စက်ကို ချထားတဲ့ အောက်ခံပေါ် မူတည်ပြီးလည်း ဂဏန်းတွေက ပြောင်းတတ်သေး တယ်ဗျ၊ ဥမာ-ရေချိုးခန်းထဲက ကြွေပြားပေါ်မှာ ချိန်တာနဲ့ အိမ်ရှေ့က ပါကေးပေါ်မှာ ချိန်တာ မတူနိုင် ဘူးလေ၊ မသက်ဝေ အတွက် အလေးချိန်ကို အနည်းဆုံး ပြပေးတဲ့ အောက်ခံကြမ်းခင်း တစ်ခု လိုက်ရှာ ကြည့်ပါဦးလား..၊ စက်ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်တွေကို ဇဝေဇဝါ ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ဆင်ခြေလျှောလို နေရာ ဖြစ်ဖြစ်လေ၊း) ညက်ညက်ညောညောနဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲဗျာ...။
rose August 9, 2011 at 10:34 PM
ပို့စ်လေးက ချစ်စရာလေး... စိတ်တိုနေတဲ့ အစ်မသက်ဝေ မျက်နှာလေးကို မြင်ယောင်ရင်း ပြုံးသွားတယ် ခိခိး))
နှင်းနဲ့မာယာ August 9, 2011 at 11:00 PM
ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီစက်ကလေး ပြန်ရောင်းပါလား...
ဘယ်လောက်ပဲ ပေးရပေးရ ပြန်ဝယ်ချင်တယ်။
ငါးကီလိုလောက်တိုးချင်လို့ ကြိုးစားနေတာ ၁၀ နှစ်လောက်ရှိပြီ။။။
ညီမကတော့ ငါးကီလိုလောက်ထပ်တက်ရင် အရမ်းဝမ်းသာမှာ။
မယ်စင်္ကြာဝဋာရဲ့ ဘော်ဒီဝိတ်တန်းက မတက်သေးဘူး....
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 10, 2011 at 1:46 AM
မမသက်ဝေရဲ့ ပေါင်ချိန်စက်အကြောင်းဖတ်မိတော့ အသံထွက်အောင်ရယ်မိတယ်
ဘာလို့ဆိုတော့ ညီမလည်း ပေါင်ချိန်စက်တစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်တတ်သူမို့လေ..
ဟိုးတလောက ဝိတ်လျှော့တော့ ပေါင်ချိန်စက်နဲ့ နေ့တိုင်း ချိန်ဖြစ်တယ်
ဒါပေမဲ့ ရက်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဘယ်တော့ချိန်ချိန် ပေါင်ချိန်က ဒီလောက် ဒီလောက် ဖြစ်နေတာ လျှော့မသွားဘူး
ဒါနဲ့ စိတ်တိုပြီး ပေါင်ချိန်စက်ကို ကိုင်ပေါက်ပစ်လိုက်တယ်
ပေါက်ပစ်ပြီးမှ ပြန်ကောက်ပြီး ပြန်တက်ချိန်တော့ ၁၀ပေါင်တောင် လျှော့သွားတယ်
အဲဒီတော့မှ ပါးစပ်က ပြောမိတယ်
ဒါမှ ပေါင်ချိန်စက်က မှန်တာ လို့.. ဟိဟိ
ဆုမြတ်မိုး August 10, 2011 at 10:39 AM
ဟီးဟီး.... လာချိန်ဦးမှ တီသက်ရယ်..
မဒမ်ကိုး August 10, 2011 at 1:39 PM
ဟား ဟား ဟားဟား
း) နောင့် တော့ မနေ့က သွေးသွားလှုတော့...အဲ့မှာ ရှိတဲ့ ပေါင်ချိန်စက် နဲ့ ချိန်လိုက်တော့ အိမ်က ပေါင်ချိန်စက်ထက် 2KG တောင် နည်းနေလို့ ပျော်တစ်ပြုံးပြုံးဖြစ်နေတား))။
မမသက်ဝေ တို့အိမ်လာလည်မှ ချိန်ကြည့်မယ်..ဟုတ် မဟုတ်း)
ခုနကဒါလေး မန့်လိုက်တယ်လို့ ထင်တာ ခု မရှိလို့.....ရေးခဲ့ မရေးခဲ့ မသေချာလို့ ပြန်မန့်တား)
" နောင့် တော့ မနေ့က သွေးသွားလှုတော့...အဲ့မှာ ရှိတဲ့ ပေါင်ချိန်စက် နဲ့ ချိန်လိုက်တော့ အိမ်က ပေါင်ချိန်စက်ထက် 2KG တောင် နည်းနေလို့ ပျော်တစ်ပြုံးပြုံးဖြစ်နေတား))။
မမသက်ဝေ တို့အိမ်လာလည်မှ ချိန်ကြည့်မယ်..ဟုတ် မဟုတ်း)"
ပန်းချီ August 10, 2011 at 9:06 PM
ရယ်လိုက်ရတာဗျာ...များတို့ကတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိလို့ ပေါင်ချိန်စက်ကို ဆေးရုံမှာထားရတဲ့ အရာလို့သာမှတ်ပြီး အိမ်ပေါ်ခေါ်မတင်ပေါင်..အမှတ်တမဲ့ဆေးရုံရောက်မိရင်တောင် သူ့ကိုမမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ခေါ်ကိုခေါ်ဘူးးးး :D
သိင်္ဂါကျော် August 11, 2011 at 11:24 AM
ဒါမျိုးစက်တော့ ဝယ်လို့ကို မဖြစ်ဘူး.. :D
We are in the same boat.I hate that kind of weight scale.....:))
tg.nwai August 13, 2011 at 1:24 AM
ဖတ်ပြီး သဘောကျသွားပါတယ်...သက်ဝေရေးမှ ပေါင်ချိန်စက်လေးလည်း အသက်ဝင်နေတဲ့ ညစ်ကျယ်ကျယ်ကောင်လေး ဖြစ်သွားတယ်...း)))
တန်ခူး August 13, 2011 at 10:39 AM
သက်ဝေအိမ် လာမလည်တော့ဘူး...အဲဒီပေါင်ချိန်စက်ကို ကြောက်ကြောက်... ဒီက လောကကြီးမှာ ပေါင်ချိန်စက်ဆိုတဲ့ အရာရှိနေတယ်ဆိုတာ တမင်တကာကြီးမေ့ထားတဲ့သူ
ဇွန်မိုးစက် August 15, 2011 at 9:33 PM
ဖတ်နေရင်းနဲ့ ပြုံးလိုက်ရတာ မရေ။ :D
အိမ်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေါင်ချိန်စက်တစ်လုံးရှိတယ်။ ညိုလေးက ထမင်းစားပြီးမှ တက်ချိန်ပြီး ဇွန်က မနက်မိုးလင်း... ရေမသောက်ခင်၊ အပေါ့အပါးသွားပြီးမှ တက်ချိန်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို motivate လုပ်နည်းတစ်မျိုးပေါ့။ အဟီး...
ပေါင်ချိန်ခါနီးရင် မျက်မှန်တောင် ချွတ်ထားပလိုက်တယ်။ တော်ကြာ သူ့ကြောင့် သုညနောက်က ဒဿမ ဂဏန်းတစ်လုံး တိုးသွားမှာစိုးလို့။ :D